Ambonin'ny matrices: Martin Vrijland
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	amin'ny 1 Aprily 2015	• 9 Comments
Ny tranonkala 'Beyond the Matrix' dia fandraisana andraikitra avy amin'i Martin Vrijland. Ity tranonkala ity dia hanome toerana ho an'ny mpanoratra izay mety tsy hitovy ny fahitana ny tsirairay, fa mitady ny tsiambaratelon'ny fahatsiarovantsika. Satria izany no zava-drehetra; 'Fahatsiarovan-tena'.
Amin'ny tranonkalany manokana martinvrijland.nl Mifantoka indrindra amin'ny famoahana lainga amin'ny haino aman-jery izy, fa mampiseho ihany koa ny fandaharam-potoana hipoaka manerana izao tontolo izao. Ny teny hoe 'World World Order' dia matetika mandalo amin'ny toerana samihafa amin'ny fampahalalam-baovao hafa. Ao amin'ny tranonkalany, Vrijland dia te-hampiseho fa ny olombelona dia mihazona hatrany amin'ny ambaratonga ambany amin'ny fahatsiarovan-tena noho ny tahotra, noho izany dia voafandrika amin'ny karazana WiFi tambajotra izay ny Vrijland 'ny satroka Satin'Ambony. Tsy nanala izany anarana izany tao amin'ny ankihibeko izy, fa nalainy avokoa ny sata satroboninahitra Saturn, izay hitanao manodidina antsika rehetra. Nasongadiny ny tandindon'ny fivavahana, amin'ny orinasa logos, ary koa amin'ny indostrian'ny horonantsary sy mozika. Ny fahitana an'io tandindona io dia tokony hanentana antsika mba hieritreritra an'izany. Hitantsika ihany koa ny tandindona mitovy amin'ny satanisma izay nohajain'ireo mpihira malaza ary nantsoina ampahibemaso ny fanesoana Aleister Crowley.
Raha ho tonga indray mandeha ny zava-misy mahafantatra ny eto an-tany raha ny marina dia karazana teraka izay ny fanahy dia voafandrika ary mahita fa ny ao anatintsika lalina zavatra gnaws izay manome antsika ny fahatsapana fa misy mihoatra noho ny Misy harato fandriam-pahalemana. Ny harato fandriam-pahalemana ho an'io fahatsiarovan-tena ambony io, hatreto dia nanome antsika ny fahitana ny lanitra, ny helo ary ny mpamonjy. Mila hery ivelany izay tokony homena antsika isika. Afaka navotana àry ny fanahintsika. 'Olana, fihetsika, vahaolana', dia ny ampahany betsaka izay nampiharina tamin'ny olombelona nandritra ny arivo taona. Ho an'ireo izay nahatsapa fa tsy nety ny tambajotra fiarovana dia napetraka tamin'ny hariva ny harato vaovao. Ny tena fifohazana marina dia mitranga rehefa manomboka mahita fa ny ampahany amin'ny fanahintsika tany am-piandohana dia voafandrika ao anatin'ity matrix ity. Toy ny iray quantum confusion miaraka amin'ny voalohany izay mitazona ny fanahintsika hifanerasera amin'ny tena loharanon-kevitra. Ho fanajana izany dia azonao atao ny mamintina fa ity matiora ity dia toerana maizimaizina izay efa voafitaka avy amin'ny sata tany am-piandohana. Nampitahain'i Vrijland amin'ny sary miaraka amin'ny Ray Kurzweil - CTO an'ny Google ary koa filozofa - izay milaza fa izahay in 2045 dia nahatratra ny tsy fahafatesana noho ny fivoaran'ny nanotechnology. Ny sarimihetsika 'Transcendence' dia mampiseho izany tsara. Raha toa ka mahomby amin'ny fanatanterahana an'ity tsy fahafatesana ity ny 'tetikasa Google X', dia tsy faminaniana ara-pivavahana fotsiny ihany (manatanteraka ny tenany) dia azo tanterahina, fa afaka manana 'avatars' ihany koa isika. Ny 'avatar' dia toy izao, ny kopia bio iray nanotechnologika izay tsy azo tsinontsinoavina intsony amin'ny tena (tsy avy amin'ny voalohany). Ary mazava ho azy, i Ray dia manome toky anao ho modely lavorary kokoa. Tsy mila intsony ireo botox sy ireo fitsaboana tsara tarehy rehetra ianao. Ilainao ny manome alalana hidina 'inona' izay mifehy ny vatana amin'ny alàlan'ny aterineto. Ary raha 'izany' dia toa ny fanahinao na ny 'fahatsiarovanao' na ny fomba tianao hiantso azy, dia mifehy ny Google i Google. Ary izany indrindra no zava-misy efa iainantsika. Ny tena zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao dia efa simulation ao anatin'ilay voalohany. Ny toe-tsaintsika mifamatotra no mahatsapa izany. Misy zavatra iray mitongilana ao aminao sy amiko.
Ny tanjon'ity tranonkala ity dia tsy mitaraina momba ny zava-drehetra izay tsy mety amin'ity simulation ity (ato anatin'ity tantara ity), fa mba hitady fomba hanaisotra antsika amin'ity matiora ity. 'Ity' ity dia tsy iza isika. 'Ity' ity dia tsy any amin'izay misy antsika. Ny tany am-boalohany dia any ivelan'ny toeran'io matrix io. Ao no misy ny 'loharano'. Ny horonantsary 'Source code' dia famokarana Hollywood iray tsara tarehy izay mampiseho kely ny fomba ahafahan'ireo zava-misy ara-paritra ireo mitazona antsika. Ny tena zava-misy iainantsika ankehitriny dia eo am-pelatanan'ny vondrona iray antsoina hoe Martin Vrijland, antsoina hoe 'ny Satry cult'. Izy ireo no mpiambina an'ity matrice ity. Tsy maintsy manome ny fanahy ao anatin'ity matroka ity izy ireo ny fahatsapana fa misy tsy misy, saingy ny entana entiny (fivavahana, sns.) dia mitondra ireo fanahy ireo ao anatin'io mari-pahaizana io. Ity tranonkala ity dia hanandrana hampiseho anao ny fomba ahafahantsika manilika an'ity matrix ity. Ny fanontaniana dia hotsaraina hoe: 'Aiza ny loharanonay ary inona moa izany?' na 'Inona ny loharanon-kevitra avy amin'ny zavatra rehetra?' ary 'Mbola mila manahy momba izay mitranga eto isika?' Afaka manohy miady amin'ny 'New World Order' isika; afaka manohy ny tahotra amin'ny tetik'adiny isika; Afaka manohy manao antoko mitovy hatrany amin'ny Titanic isika mandra-pahaleo ny sambo; dia mifantoka amin'izay zava-mitranga eto izany. Ary ny zava-mitranga eto dia tsy dia manantena loatra. Mazava ho azy ho an'ireo satanista (Saturn cult nists), satria izy ireo dia eo anilan'ity matrix ity. Valisoa izy ireo noho ny fanoloran-tenany hitazona io zava-misy io. Hahazo valisoa ao anatin'izany toe-javatra izany izy ireo amin'ny fanambinana ary na dia ny "fiainana mandrakizay" (nano-teknolojia) aza. Inona no anananao fiainana mandrakizay ao anatin'ny zava-misy marina? Ireo izay mahatsapa fa afaka miaina amin'ny fisainana dia afaka miverina any am-piandohana. Tsara kokoa ve izany any? Amin'izao fotoana izao, ny Vrijland dia mametraka ny valin'io fanontaniana io amin'ny teninao manokana.
Lisitry ny rohy loharano: Wikipedia, MartinVrijland.nl
Ny sata satriny sy ny fandaharana azy
Ny Fanjakana fahefatra, ny fametrahana ny governemanta matematika amin'ny alalan'ny famonoana olona
Ny marika manodidina antsika: ampahany 1
Tags: Beyond The Matrix, Featured, Martin Vrijland, Ny fahamboniana
Torah Freeman nanoratra hoe:
1 Aprily 2015 ao amin'ny 17: 16
Mbola aho fiovam-po, ny tany tontolo dia tsara tarehy, 3-D-5-saina-hevi-dravina ny zava-misy dia zava-misy, ary azo antoka fa mahafinaritra rehefa fifanarahana iray izay azon'ny ety an-tany tahaka ny fanahy masina (anatiny lehilahy) ary avy eo dia miasa mba hanova ny tany ho paradisa toy ny tontolo iainana; mba hidina Gd sy tonga soa (by activating ny fototry ny hoe iza isika ary hanaiky ny tenantsika misy fifandraisana amin'ny Source avy izay efa tonga), isika dia afaka ho toy ny mpiasa Light / mpiady (toy ny fanahy, vahiny in vonjimaika vatana izay mety simba, tsy maharitra ary tsy fonenana nalaina an-ny mazava ao amin'ny zara-) ity toerana ity mba ho trano ny fahazavana mba hamoronana ny filaminana avy amin'ny korontana, ratsy (maizina, egocentricity, fitiavan-tena, ny fitiavan-karena, nandroaka ny biby fohy ny fiainana) sy handresy, mba haka ny tany ho eto an-tany mba handresy ny olona ny haizina, izay efa nandray izany ny planeta amin'ny alalan'ny rafitra ary nanana ny hofidiny hatramin'ny farany, mba hahatonga ny haizina haharesy, ary izy ireo ihany koa dia ireo izay miezaka hahatakatra ny zava-misy marina momba ny matrix. Izy ireo ihany koa no manao ny zava-drehetra hanafoanana ny fahatsiarovan-tena sy ny fanagadrana ny olombelona amin'ny rafitra fitiavan-tena mifototra amin'ny biby, izay tsy inona fa ny fanompoan-tsampy. Isika ao amin'ny dingana farany tonga, dia masiaka dia ho niady ny ady ao, na dia hiverina amin'Andriamanitra, ny lalana ka hiditra sy hampavitrika ny fanahy sy ny fiainana ara-panahy, avy amin'ny fototra fahamarinana handresy ny diso zava-misy eto an-tany, avy ho afa-mandositra ny rafi-trano-maizina, ary tsy manaiky ho voafitaka ianareo antsika handray anjara mba nahary izao tontolo izao mba ho seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny fanahy fahatairana / anaty olona manala noho ny tsy fahampian-tsakafo, dia maty izy ka ny farany vokatry ny mandalo ny lasibatra ny fanahy masina ao amin'ny sehatra eto an-tany ity, dia ho avy ny mazava-Source, ary ny fanahy dia tsy ho toy ny mazava-mazava anjely tamin'ny tany ity vatana ho fananany sy ny fahalalahana mba handeha amin'ny alalan'ny astral samihafa tontolo sy ny zava-misy. Ny mpandresy dia hahazo ny fiainana tahaka ny anjely, ary ny tenany dia afaka matrialiseren dematrialiseren ny fitsanganana amin'ny maty fa amin'ny faran'ny andro, izay mahazo ny fanahy ny opstandigs (hazavana) vatana, ary tsy ho mety simba, ny aretina, ny fijaliana sy ny fahafatesana, ary avy eo ny lehilahy anaty / fanahy afaka matrialiseren sy hanao zavatra lehibe ny illusionary zava-misy eto an-tany, ary dia ho afaka ny dematrialiseren-tena hiaina ny fanjakana 'Andriamanitra eo amin'ny halebeazana hafa sy ny zava-misy. Ny fanahy izay ankehitriny, ho tsara fanahy ny lanitra, ny lanitra dia ho an'ny fanahy izay mamy sy mahafinaritra ho any, na izany aza, dia maharitra sy maha hevi-dravina, mandra-pahatongan'ny ora ny fitsanganana amin'ny maty efa tonga, avy eo, ny fanahy / anaty olona ny fiainana tsy azo ekena ary ho tahaka ny anjely Angelic.
Don Quijotte nanoratra hoe:
2 Aprily 2015 ao amin'ny 23: 02
Tontolo iainana ve ny tany? Ahoana no ahafantaranao izany fa azo antoka?
3 Aprily 2015 ao amin'ny 07: 13
Raha toa ny tany ka tsy misy na inona na inona ny endrika, dia tsy hanova zavatra ho antsika, raha tonga eo amin'ny tanjona isika, dia tsy mampaninona na dia ny tany aza dia ho sahiran-dava, na boribory, na inona na inona. manana. Ny fanontaniana dia hoe: moa ve isika vonona ny ho tonga amin'ny teboka, inona no hitranga, izay tena manan-danja amintsika.
1 Aprily 2015 ao amin'ny 17: 45
Edom (Vatican) ankehitriny dia nanipika izao tontolo izao tamin'ny fitondrana mampahory azy. Edoma velona amin'ny sabatra sady toy ny biby fiompy, ny mpihaza, dia biby ary indraindray miezaka hanafoana ny zanaky ny mazava nody olon-kafa tarehiny ao amin'ny olombelona, ​​ary na dia akanjo akanjo ara-panahy. Fa tonga ny fotoana, na dia tsy mazava intsony ny ankizy hanompo ny fanjakany Edoma, izay biby intsony handresy, dia nampiasa ny sabatra, ary ho faty amin'ny sabatra. Ary izao amin'ny loggerheads ny mpandefa zana-tsipìka avy any an-efitra, na aiza na aiza Edoma manjaka, nampirisika ny mpandefa zana-tsipìka Azy, satria manaiky ho voninahitro an-tany ity ny fitondrany, any amin'ny farany izy ireo dia hanana ny fahavalo iombonana hiady, ny 1 dia hampiasa ny iray hafa ho toy ny fitaovam-piadiana handroaka ny Mpanjaka avy amin'ny hazavana.
ElveTwelve nanoratra hoe:
7 Aprily 2015 ao amin'ny 12: 34
Yeah Martin, miverina ianao, Misaotra anao.
Tsy tiako izany any amin'ny firenena alimina raha tsy misy anao.
7 Aprily 2015 ao amin'ny 16: 42
http://shoebat.com/2015/04/06/an-english-six-year-old-transgender-child-in-preparation-for-the-coming-pedophilia-sodom-and-gomorrah/.. tany amin'ny tany Edoma dia ho hamely heviny mahazatra, ho fipoahan'ny ny fanandramana mahatsiravina indrindra, amin'ny faharatsiana manjaka toerana avo indrindra, izay misy ny olona marary sy ao anatin'ny teny grika -> maimaim-poana <- kolontsaina / system ary mieritreritra (demokrasia) ny zava-drehetra toa azo atao izany ..
7 Aprily 2015 ao amin'ny 16: 49
Raha any Afovoany Atsinanana, ny afo dia miha-flaring izy, Democracy dia ho eo amin'ny sehatry ny Edoma (kisoa) dia hohozongozonina, ny mpandefa zana-tsipìka tany an-efitra dia gaga, ary dia ho any amin'ireo faritra izay Gresy (demokrasia) sy Ejipta (Midera ny fankalazana ny Obelisken), ny afo mihetsiketsika sy mamotika.
18 Aprily 2015 ao amin'ny 06: 14
Daniel 2: 44-45 Salamo 33: 10-22 Salamo 108: 2-14 Salamo 118: 1-29, Jeremia 51: 1-58, Zakaria 9: 9-17, 10: 3-12, Eny ny andro for Democracy (Gresy, ny fandrian-jaza ny demokrasia sy foana mihoatra noho ny resaka sy ny manipulations ringana amin'ny fiteny roa avy amin'ny kina, matoky azy na oviana na oviana, ny fahavalo mahery, irery ihany dia ho ao am-pon'ny 'izao tontolo izao ny Salamo 12: 2 -9) Ahoana no izy mandeha amin'ny mpanjakan'i Edoma, izay dia manao ilay hamama Dagona, ny trondro lohany, dia tsy kely iray ny zava-drehetra maneran-tany nisambotra sy ny Tempoly ianao harena no voaroba, ny andro fampamoahana ho avy aminao Roma. Jereo, Iran sy ny mpiara-dia aminy dia dodona ny ampitondraina ny rafiny dia indrafo ady, ny andohalambo fahavalo tanteraka ho ringana.
mpanindrona nanoratra hoe:
8 Novambra 2015 ao amin'ny 19: 59
Facebook dia fandaharan'asan'ny CIA Mark Zuckerberg dia nanana akanjo maromaro natao. Ao anatin'ilay jirofo dia misy ny logo amin'ny taona 2010. Ny logo dia mifandray amin'ny illuminati; ny taona 2010 miaraka amin'ny Lohataona Arabo. Ireo fampisehoana dia azo atrehina amin'ny alalan'ny Facebook. Tokony hanjavona ho an'ny firenen'i Israely ny Afovoany Atsinanana. Milaza ny talen'ny CIA fa tanteraka ny nofinofiny "mando". Ny tsirairay dia mampiseho ny antsipiriany manokana: sary, nomeraon-telefaona, namana, inona no ataonao ... Na dia tsy miresaka momba ny angona manokana aza ianao dia afaka mamorona profiling (profiling): namana dizitaly, fividianana amin'ny aterineto.
« Ny Fanjakana fahefatra, ny fametrahana ny governemanta matematika amin'ny alalan'ny famonoana olona
Ny sata satriny sy ny fandaharana azy »
Total visits: 1.303.198
Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, ny fanakatonana lalina sy ny internet amin'ny 1 aprily?
Martin Vrijland op Krizy Corona: rahoviana no vita ary inona no tokony ataontsika ankehitriny?
Joris Michels op Rehefa tonga ny fanidiana koronavirus total sy ny endriny: poste fitsapana ary tafika
Mind Supply op Krizy Corona: rahoviana no vita ary inona no tokony ataontsika ankehitriny?